လူတိုင်းသိသင့်သောကံလေးမျိုး | မေတ္တာရိပ်
← ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ/ ဗုဒ္ဓ၏ ၀ိဘဇ္ဇ၀ါဒ တရားတော်/ ကာလာမသုတ်
၃၁ ဘုံ →
လူတိုင်းသိသင့်သောကံလေးမျိုး	Posted on September 5, 2009	by mettayate ၁) သေပြီးနောက် ပထမဆုံး အကျိုးပေးမည့်ကံမှာ ဂရုကံ ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကံမှတားမရဘဲ ကြီးလေးသောကြောင့်တည်း။
ထို ဂရုကံသည် အကုသိုလ်အရာတွင် ပဉ္စာနန္တိရိယကံ ၅ ပါး၊ နိယတ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုယူရပြီး ကုသိုလ်အရာတွင် မဟဂ္ဂုတ်ကံ (ပထမဈာန်၊ ဒုတိယဈာန် စတဲ့) များကို ယူရသည်။
ပဉ္စာနန္တိရိယကံ ၅ ပါး -အမေသတ်သော အကုသိုလ်ကံ
-ဘုရားရှင်ကို သွေားစိမ်းတည်အောင်လုပ်သော အကုသိုလ်ကံ
နိယကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ၃ မျိုး
-သတ္တ၀ါတို့၌ ကောင်းကျိုး မကောင်းကျိုးကို ပေးတတ်သော ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံ သည် မရှိဟူ၍ ယူဆစွဲလမ်းခြင်း – နတ္တိက ဒိဋ္ဌိ
-သတ္တ၀ါတို့၌ ရှေးအတိတ်အကြောင်းသည် မရှိဟု ယူဆစွဲလမ်းခြင်း – အဟေတုက ဒိဋ္ဌိ။
-လူသတ္တ၀ါသည် ကောင်းမှုကို ပြုသော်လည်း ကောင်းမှုမဖြစ်၊ မကောင်းမှုကို ပြုသော်လည်း မကောင်းမှုမဖြစ်ဟူ၍ ယူဆစွဲလမ်းခြင်း – အကိရိယဒိဋ္ဌိပင် ဖြစ်သည်။
ပဉ္စာနန္တိရိယကံ နှင့် နိယကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အယူရှိသောသူများမှာ သေပြီးနောက် မည်သည့်ကုသိုလ်မှတားမရဘဲ အ၀ီစိငရဲ သို့ ကျရသည်။
ပဉ္စာနန္တိရိယကံ ကျူးလွန်မိ၍ အ၀ီစိကျသူများသည် ကမ္ဘာပျက်လျှင် လွတ်နိုင်သေးသော်လည်း
နိယကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အယူရှိသူများမှာ ဤကမ္ဘာပျက်လျှင် အခြားမပျက်သော ကမ္ဘာသို့ပြောင်းပြီး ငရဲခံရတတ်သည်။
၂) ဂရုကံ အကျိုးပေးစရာ မရှိလျှင် သေခါနီးကပ်၍ ပြုလုပ်အပ်သော အာသန္နကံ က အကျိုးပေးသည်။ (ဆိုလိုသည်မှာ – သေခါနီးမှ သရဏဂုံဆောက်တည်ခြင်း စသဖြင့် ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ သေခါနီးမှာ သားစွဲ၊ သမီးစွဲ၊ ဥစ္စာစွဲများဖြစ်ခြင်း စသည်ဖြင့်။ )
၃) ထို အာသန္နကံ ကအကျိုးမပေးလျှင် အမြဲလေ့ကျက်အပ်သော (အမြဲလေ့လားပွားများနေတဲ့) အာစိဏ္ဏကံ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် က အကျိုးပေးသည်။
၄) ထို ကံသုံးမျိုးစလုံး အကျိုးမပေးတော့မှ ပြုကာမျှဖြစ်သော စိတ်စေတနာထက်ထက်သန်သန်မပါသော ကဋတ္တာကံ က အကျိုးပေးသည်။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ/ ဗုဒ္ဓ၏ ၀ိဘဇ္ဇ၀ါဒ တရားတော်/ ကာလာမသုတ်